Nei tichida katsi | Noti Katsi
Ndiwo mubvunzo uyo munhu akambozvibvunza ... uye nanhasi achiri kuzvibvunza, dzimwe nguva. Mushure mezvose, imhuka yakazvimiririra, yakasurukirwa iyo isingade kuve nevanhu. Izvi ndizvo zvakagara zvichitaurwa, handiti? Asi, avo vedu vakave nemukana wekuve chikamu chemhuri yeumwe wavo, uye ivo vedu, Tinoziva kuti hazvisizvo. Kana.
Kana iwe uchiri usina kadiki diki, pano iwe uchaona nei tichida katsi.
1 Sei tichivada zvakanyanya?
1.1 Vane hunhu hwakafanana newedu
1.2 Ivo ndidzo shamwari yedu yepamhepo ine hura
2 Sayenzi inotii?
2.1 Vanoda katsi vanowanzo kuve vanopinza
2.2 Catlovers vanogona kuda tsika zvakanyanya
3 Handidi katsi, nei?
Sei tichivada zvakanyanya?
Katsi uye vanhu havagone kuve vakasiyana zvakanyanya: vamwe, kazhinji vasinganzwisisike, vakasurukirwa, vanofarira kuenda vasingazivikanwe uye vanopedza chikamu chakanaka chehupenyu hwavo vakarara; vamwe kune rimwe divi, isu tiri vehukama, isu tinoda kuva toga asi mune zvidiki diki (kazhinji), uye isu tinowanzo kunakidzwa nekunze kwekunze zvakanyanya.
Nekudaro, kune vazhinji vedu vanodanana nemeso ake anotapira, mafambiro ake agile, iyo feline iyo, kunyange zvingaite senge, inogovera yakawanda yemageneti ayo nemhuka dzakadai sengei, shumba kana macougars.
Izvo chaizvo izvo, pakupedzisira, chii chinotishamisa nezve katsi? Zvakanaka, hadzisi dzimba, kana kwete zvachose. Ivo havana kuita sembwa, dzakatsamwa dzakangonaka asi zvisingaenzaniswi nekatsi, vanogara vakagadzirira kufadza vanhu. Makati anoenda nenzira yavo.
Unogona kuvadzidzisa hunyengeri, asi ivo vanongodzidza kana vachida; kana ivo vakawana chimwe chinhu mukudzoka (kurapwa, chikamu chekupuruzira uye / kana chikamu chemutambo).
Mune mawonero angu, tinoda mhuka dzine mvere nekuti…:
Vane hunhu hwakafanana newedu
Ichokwadi. Zvinozivikanwa kuti mhuka, nevanhuwo, isu tinowirirana zvirinani nezvimwe zvipenyu zvine hunhu hwakafanana hwedu. Kunyangwe katsi dzichiri mhuka dzinodya nyama, avo kubva pakuberekwa kusvika kumagumo ezuva ravo vanogonesa hunyanzvi hwavo hwekuvhima kuburikidza nekutamba, ivo vakafanana chaizvo nesu mune zvimwe zvinhu. Zvichida, chakanyanya kukosha kuve nekugara zvakanaka. Semuyenzaniso:
Kana iwe ukavapa rudo, iye achakupa iwe. Uye kana ukamurega, ndichaita zvese zvinogoneka zvekutora pfungwa dzako.
Anokukwazisa paanokuona wasvika, uye dzimwe nguva anototi "usaoneke" - meowing - paunobva.
Anofara chaizvo kana iwe ukamupa kurapwa-kwekatsi-, uye zvakawanda zvikuru paunomupa chimedu chesalmoni, kana ham.
Ukamubata zvakaipa kamwe chete, hukama hunopera, uye kuvimba kwakarasika. Kubva ipapo, zvinogona kutora mwedzi kuti kati inzwe kunakidzwa newe zvekare.
Iwe unoziva here mamwe eaya maitiro mune vanhu?
Ivo ndidzo shamwari yedu yepamhepo ine hura
Ivo vanonakidza, vanofambidzana, vane rudo, vanoita kuti isu tisekwe ... Uye zvese, kungova nedenga rekuvadzivirira kubva kune yakaipa mamiriro ekunze, uye yakazara feeders. Zvakanaka, uye matoyi, scratcher, marara matai ... Asi tinoda zvakanakisisa kwavari, saka mari yemari inobatanidzwa ... hachisi chinhu chinonetsa.
Nokuti ivo chikamu chemhuri yedu. 🙂
Ichi chinyorwa hachingave chakakwana tisingazive zvakawanikwa nesainzi. Ichokwadi kuti kana vachiita zvidzidzo zvehunhu hwekatsi uye / kana hwevanhu vanovada, tinopedzisira tazvibvunza chimwe chinhu chakadai: »uye ikozvino vanozviziva?». Ndizvozvo.
Asi isu hatifanire kukanganwa izvo, kune izvo zvatiri zvechena pfungwa, kune vanhu vazhinji chinhu chitsva. Uye kuchine vazhinji vanonetseka kuti katsi vane manzwiro here kana kwete.
Tichifunga izvi zvese, ngatitarisei zvino sainzi inoti chii.
Vanoda katsi vanowanzo kuve vanopinza
Muna 2010, vanhu vanosvika mazana mana nemazana mashanu vakazadza fomu rakagadziriswa neYunivhesiti yeTexas. mabvazuva kudzidza Yaitungamirwa nana psychologist Sam Gosling, uye ikakamura vakapindura kuva vanoda imbwa, vanoda katsi, mhuka dzese kana kwete.
Mibvunzo iyi yakarongedzwa kuitira kuti vazive tsika dzekushamwaridzana dzavaive, kana vaine pfungwa dzakavhurika, kana vaine hushamwari, uye / kana kana vaimbonetsekana, pakati pevamwe. A) Ehe, Chiyero cheGolding chakatsanangura vadikani vekatsi sevanhu vanofungisisa uye vanopinza, vasina kusimba pamoyo, asi vane fungidziro yakakura uye chimiro chakakwirira chekuva nezviitiko zvitsva.
Ku 'vanoda katsivangangoda tsika zvakanyanya
Makore mana mushure mekunge Gosling aita chidzidzo chake, purofesa wepfungwa paCarroll University muWisconsin anonzi Denise Guastello aizvitungamira, achifunga kwete hunhu hwevanoda mhuka chete, asiwo nharaunda yavo.
Semuenzaniso, mumwe munhu asingafanire kufamba imbwa, anogona kushandisa iyo yemahara nguva kuverenga bhuku, kana kushanyira mamiziyamu semuenzaniso. Kunyangwe, zviripachena, izvo hazvireve kuti vanoda katsi vakangwara kupfuura vadikani vembwa, kwete zvachose; asi hongu izvo katsi-vakapindwa muropa vanowanzo kuve nehunhu uye hunhu hwehunhu.
Zvichida, uye chete pamwe, ndosaka paine akawanda maartist uye vanyori, vakafa kana kwete, avo vakararama kana vari kugara nekatsi, saJorge Luis Borges kana Ray Bradbury, pakati pevamwe.
Kana uchida, iwe unogona kuverenga chidzidzo pano (Iri muChirungu).
Handidi katsi, nei?
Kune vanhu vasingade katsi, futi nekuti vakagadzira imwe mhando yekutya kwavari, kana nekuti vakaita tsaona, kana nekuti havangovafarire sezvo chero mumwe wedu asingakwanise kuda hamsters semuenzaniso.
Kana zviri zvekupedzisira, hapana chinogona kuitwa. Asi kana zvichikonzerwa nechobia kana mamiriro anoshungurudza akamboitika kare, saka zvinokurudzirwa kubvunza nyanzvi, chiremba wezvepfungwa, kunyanya kana uchizogara nemunhu anoda katsi. Izvi zvichaita kuti kugarisana pasina kupokana kuve nani.
Kunyange zvakadaro, usazvimanikidza. Sezvinei, Phobias haapore kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, kana nekupuruzira chero kati inouya kwauri. Unofanira kuenda zvishoma nezvishoma, uchifamba zvako. Fara vanzwisise, izvi zvingangoita kuti unzwe zvirinani.
Ndinovimba yakave yakakunakira iwe 🙂.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Nei tichida katsi
Yajaira Lopez akadaro
Ndinoda. Izvo zvipenyu zvinoshamisa. Zvisikwa zvaMwari senge zvese zvipenyu zvinogara mune zvakasikwa
Pindura kuna Yajaira Lopez
Zvinonzi Mwari ndiye akasika katsi, kuti tiipuruzire toibata mumaoko edu, hatingaiti nemhara yakaita se, Tiger, Shumba, Panther, ingwe, mbada, etc. mhinduro yakarurama?
Mangani kurova paminiti zvakajairwa katsi?